Birmingham, AL • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mamandraha tapakila Nuru tsara indrindra any Birmingham!
Birmingham dia tanàna any amin'ny faritra afovoany avaratra amin'ny fanjakana amerikana Alabama. Birmingham no toerana misy an'i Jefferson County, Alabama izay be mponina indrindra ary faritany fahadimy lehibe indrindra. Ny faritra statistikan'i Metropolitan Birmingham-Hoover dia misy mponina 1,151,801 49 XNUMX, ka io no be mponina indrindra ao Alabama ary XNUMXth-be mponina indrindra any Etazonia. Rehefa reraky ny asa mandritra ny tontolo andro ianao dia manasa anao hamandrika karazana iray ihany fanorana erotika any Birmingham, AL. Anontanio ny momba an'i Nuru sy Tantra.